Khadhaab Al-Muhaajir Oo Ka Soo Muuqday Qeybta 3aad Ee Boorri Mu’miniinta (DAAWO+AKHRISO) | Radioandalus24
Mu’asasada Al-Kataa’ib, garabka warbaahineed ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahisay qeybtii 3aad ee silsiladda Boorri Mu’miniinta oo ah muuqaallo taxane ah oo xambaarsan fariimo ku socda Muslimiinta bariga Africa.
Xalqadan waxaa lagu soo gudbinayaa kalimad muhiim ah oo uu jeedinayo walaal lagu magacaabo Khadhaab Al-Muhaajir oo ka soo jeeda dalka Uganda, kaas oo ka mid ahaa Muhaajiriintii timid Saaxaadka Jihaadka Soomaaliya, ka tababartay, ka dagaalamay dhulkeeda, ugu dambeyntiina ku shahiiday.
Khadhaab wuxuu ku shahiiday Magaalada Muqdisho, Wuxuuna caan ka ahaa difaacyada Muqdisho halkaas oo uu muraabidh ku ahaa sanado badan, ugu dambeyntiina ku shahiiday.
Hoos Ka Akhri Tarjamada Kalimadda Oo Somali Ah.
Khadhaab – Uganda:
Mahadda Allaah subxaanahu Watacaalaa ka dib iyo ku salinta Nabi Muxamed Salallaahu Caleyhi Wasalam. Waxay taladeyda ugu horeyso ee idinku socota tahay walaalayaal in aad Allaah ka cabsataan, sidoo kalena gudataan waxa uu Allaah idinku waajib yeelay, lana tilmaadaan Nawaafisha iyo sunooyinka dheeraadka ah. Ogaadana in taqwada iyo dhowrsoonaanta in lagu gaaro kaliya in la qaato waxa Allaah iyo Rasuulkiisu na amreen in aan sameyno, Dulinimana ay ku timaado amarkooda oo la caasiyo.
Walaalaheyga qaaliga ahow waxaan idinkula talinayaa in aad soo haleeshaan, sidoo kalena joogteysaan Jihaadka wadada Alle, kana shaqeysaan sidii uu Islaamku u guuleysan lahaa. Run ahaantii tani waa wadada saxda ah iyo dariiqa kaliya ee ay Umaddu ku soo ceshan karto sharafteeda. Waa wadada uu Allaah kaga raali noqonayo Adoomadiisa, Adoonkiisuna uu Allaah kaga raali noqon doono maalinta qiyaamaha marka uu istaago hortiisa, ka dibna idinka Alle ku galo janada.
Waxaan leeyahay dadka Muslimiinta: ha u ogolaanin gaalada in ay ku soo duulaan dhulalka Islaamka oo ay hareereeyaan Muslimiinta. Kani waa waqtigii aan baraarugi lahayn. Muslimiintu waxay in muddo ah ku noolaayeen nolol dulinimo ah iyagoo ku hoosjira dulmiga gaalada. Dhamaantiin waad aragteen qaabka ay kula dhaqmeen walaaladeena iyo sida ay xabsiyada ugu taxaabeen. Walaalayaal waa in aad fadhiga ka kacdaan oo aad baraarugtaan, sidoo kalena garataan gaabiska aad leedihiin.
Waxa aad ka walwaleysaan yeysan noqon in aad weysaan meel aad seexataan, ama cunto aad cuntaan ee ha noqdo walaaciina dhabta ah marka lagugu xisaabinayo Allaah hortiisa maalinta qiyaamaha. Dadka Muslimiinta waxaan leeyahay qaata amarka Allaah Subxaanahu Watacaala marka uu leeyahay.
Walaalaheyga qaaliga ahow, Allaah wuu ogyahay in aan jecelnahay Nolosha dunidan, waana taasi sababta aan badanaa ugu dhaganahay hantideena markii na loo sheegay in aan u soo baxno difaaca diinta iyo jihaadka wadada Alle. Dib ayaan isu dhignay anagoo waxaas oo dhan ka doorbideyna hantideena, caruurteena iyo xaasaskeena. Inkastoo aan ku dhaganahay waxyaabahan, hadana Allaah wuxuu noo cadeeyey in ay yihiin waxyaabo iska diilata oo aan micno lahayn, wuxuuna na amray in aan u baxno, una dagaalano diintiisa. Wuxuu Allaah leeyahay: waxaa laga yaabaa in aad shey jecleysaneysaan balse uu shar idiin yahay.
Marka walaalayaal ogaada nolosha Aakhiro ayaa ka wanaagsan mida dunida marka walaalayaal aan u soo degdegno nolosha Aakhiro, Run ahaantii daarta Aakhiro ayaa ah mida wanaagsan. Nolosha Aakhiro waa mid joogta ah oo aan dhamaad lahayn, halka mida duniduna tahay mid zuuleysa, marka walaalayaal ma ahan in aan ku dhagno nolosha aduunyo ee dhamaaneysa, ogaadana marka aad timaadaan dhulalka Jihaadka, una nusreysaan diinta Alle in uu Allaah idinka raali noqon doono, idinkana cafin doono dhamaan dambiyadiina, sidoo kalena ogaada walaalayaal in nasriga iyo guusha aanan lagu helin hadal badan balse taasi badalkeed waxay ku timaadaa Amarka Allaah oo la qaato iyadoo la qaadayo dhabaha Jihaadka. Haddii aad sidaas sameysaan, Allaah wuxuu idiin siin doonaa guul sida uu ku sheegay qur’aanka.
Updated: July 16, 2017 — 3:24 pm
Dhageyso Warka Duhur
Sawirrada Filimka Ceelcadde